Mursal oo Soomaaliya gelinaya dagaal Sokeeye | KEYDMEDIA ONLINE
27 September 2021 Faragelinta Farmaajo ee doorashadda oo si cad usoo ifbaxday
26 September 2021 Wasiir saaxiib la ah Farmaajo oo lagu qashqashaadey Puntland
26 September 2021 Rooble oo la kulmay Taliyeyaasha Booliska iyo AMISOM
26 September 2021 Shirqoollo ayay maleegayaan Farmaajo iyo Fahad - GMM
26 September 2021 Degmada Qoryooley garab-qabad ayay rabtaa
26 September 2021 Qaraxu ma sii soconayaa haddaan la baddelin Wasiirka Amniga?
25 September 2021 Deni: Farmaajo ha cadeysto mowqifkiisa
Mursal oo Soomaaliya gelinaya dagaal Sokeeye
Wuxuu ahaa ninkii ka dambeeyay mudo-korarsiigii Farmaajo ee horseeday dagaalkii ka dhacay Muqdisho April 2021.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoomiyaha Gollaha Shacabka, ee mudo-xileedkiisu dhamaadey Dec 2020 Maxamed Mursal, ayaa markale isku dayaya inuu difaaco Farmaajo xili dagaal kala dhaxeeya Rooble.
Waxay maalintii shalay Musharixiinta soo saareen qoraal ay uga digeen Mursal inuu dib usoo nooleeyo Gollaha Shacabka, sii uu ugu carlqadeeyo dedaallada uu wado RW Rooble ee cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil iyo qabashada doorasho hufan, oo xor iyo xalaal ah.
Mursal ayaa isku dayaya inuu soo nooleeyo Gollaha Shacabka, isagoo u adeegaya Farmaajo, waxaana laga cabsi qabaa inuu qaado tallaabooyinka dalka qalalaase kale iyo dagaal sokeeye gelin kara, kuwaasoo ay kamid tahay in Mooshin ka dhan ah Rooble qabto.
Kadib markii la dhaariyay Wasiirka Cusub ee Amniga C/llaahi Maxamed Nuur, Mursal ayaa soo saarey qoraal uu u diray Rooble kaasoo uu ku sheegay in tallaabadan uu qaadey ay ahayd mid aan waafaqsaneyn dastuurka, islamarkaana ku wargeliyay inuu weli shaqeynayo Gollaha Shacabka, loona baahnaa inuu soo marsiiyo magacaabista iyo meel-marinta Wasiirka.
Waxay Musharixiinta Mucaaradka u arkeen hadalka Mursal mid uu ku doonayo inuu kusoo nooleeyo Gollaha Shacabka, oo la ogsoon yahay in mudadii uu jiray ahaa meel uu Farmaajo ku adeegto, oo lagu riday Xukuumaddii Khayre July 2020.
Mursal wuxuu ahaa ninkii ka dambeeyay mudo-korarsiigii iyo isku-daygii afgembi ee Farmaajo kaasoo horseeday dagaalkii ka dhacay Muqdisho April 2021 oo khatar geliyay wadanka.
Ciidan gaar ah oo lagu daadiyay nawaaxiga Madaxtooyadda
Warar 21 September 2021 23:15
Fahad Yaasiin markii uu soo galay Villa Somalia durba waxaa la dareemay dhaq-dhaqaaq Ciidan, maadaama Madax aan isku wanaagsanayn oo xiisada u dhaxayso.
20 cisho iyo 20 qarax – Shacabkii waa dhamaaday
Warar 26 September 2021 8:56
Fahad Yaasiin, waxaa hore loogu eedeeyay inuu xiriir xooggan kala dhaxeeyo kooxda Al-Shabaab, isla-markaana uu u adeegsado dilalka shaqsiyaadka ka aragtida duwan.
Wadahadalladii Rooble iyo Farmaajo oo burburay
Muxuu ahaa kulanka xalay ka dhacay Xarunta NISA?